Wasiirka Amniga Puntland oo sheegay in xilka laga qaadi doono taliyaasha kantaroolada uu ka gudbay gaari qarax siday oo la qabtay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandWasiirka Amniga Puntland oo sheegay in xilka laga qaadi doono taliyaasha kantaroolada uu ka gudbay gaari qarax siday oo la qabtay
June 1, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Wasiirka Amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali. [Sawirka: Puntland Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiirka amniga Puntland Cabdi Xisri Cali Qarjab ayaa sheegay in xilka laga qaadi doono taliyaasha kantaroolada uu soo maray gaari qarax siday oo lagu qabtay kantaroolka Boosaaso.
Wareysi ay la yeelatay idaacada maxaliga ah ee Radio Daljir Qarjab ayaa sheegay in kantarooladii uu maray gaariga qaraxa siday taliyaashooda xilka laga xayuubin doono.
“Kantaroolada uu baabuurkaas soo maray oo wax lagaga qaban waayay cid kasta oo horey u joogtay tallaabo cad ayaa laga qaadayaa, mana dhacayso kantarool qarax lala dhaafay intii dadkii horey u joogay ay iska sii joogaan,” ayuu yiri Cabdi Xirsi.
“Taliyaasha ciidamada iyo taliyaasha qaybaha waxaan hadeerba ku wargelinayaa cid kasta oo kantarool qaraxaas soo maray joogtay waa in xilka laga qaado.” Ayuu ku daray wasiirka amnigu.
Shalay oo Arbaco ah ayay ahayd markii ciidamada ammaanka ee kantaroolka magaalo xeebeedka Boosaaso ay qabteen gaari xamuul ah oo siday khudaar kasoo lagu soo dhex qarshay walxaha qarxa, labo nin oo gaariga la socday ayaa ciidamadu gacanta ku dhigeen.
March 31, 2017 Madaxweyne Trump oo ciidamada milatariga Mareykanka u ogolaaday in ay weeraro badan ku qaadi karaan maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan gudaha Soomaaliya
Madaxweyne Farmaajo: Ilaa markii la i doortay ilaa hadda, wax mushahaar ah ma qaadan
Puntland’s Security Minister fires all security forces of Garowe southern checkpoint
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir wadatashi ugu yeeray madaxda Dowlad Goboleedyada sii looga wada hadlo xal u helista khilaafka taagan. Madaxweyne Farmaajo ayaa ugu baaqay madaxda Dowlad Goboleedyada in [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex qof ayaa lagu dilay qaraxyo gaari oo ka dhacay maanta oo Isniin ah meel u dhow xarunta saldhiga AMISOM ee xarunta caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, sida uu sheegay sargaal booliis [...]